Vavaky ny fanafahana amin'ny rongony | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaky ny fanafahana amin'ny rongony mahery
Vavaky ny fanafahana amin'ny rongony mahery
Amin'ny vavaka ankehitriny, dia handray anjara amin'ny fanafahana ny vavaka amin'ny zava-mahadomelina isika. Ny devoly dia tonga mpitondra an'izao tontolo izao. Nahomby izy namorona vazaha samihafa mba hamotehana ny fiainan'ny tanora eran'izao tontolo izao. Iray amin'ireny fahazarana ireny izay ampiasain'ny devoly amin'ny zava-mahadomelina mafy.
Nandritra ny andron'ny lehilahy ao amin'ny Baiboly, ny demonia niady taminy dia tsy mitovy amin'ny demonia izay iadiana amintsika ankehitriny. Zavatra toa sarotra fitsaboana zava-mahadomelina tsy mbola nisy akory taloha. Nefa izao dia lasa filaharana ny andro, mahita tovolahy sy tovovavy izay nanelingelina ny fiainany amin'ny fiankinan-doha ny fiainany.
Araka ny antontanisa, tovolahy sy tovovavy an-tapitrisany no miady mangingina amin'ity demonia ity eran'izao tontolo izao. Satria zavatra ratsy io, maro amin'izy ireo no tsy hanokatra noho ny tahotra ny fanilikilihana, noho izany dia aleony ihany miady irery ny ady. Raha ny ankamaroany kosa, dia maro amin'izy ireo no resin'ny demonia atao hoe fahazaran-drongony.
Betsaka ny anjaran'ny zatovolahy sy vehivavy no simban'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina. Ny lehilahy andevozin'ny zava-mahadomelina dia ho lasa aloky ny tenany, tsy ho afaka hieritreritra mahitsy izy ireo, afa-tsy ny hahatratra tanjona. Ny fiankinan-doha dia hino ny olona iray fa ny fahavelomany dia voan'ny fiankinan-doha aminy. Ankoatra izany, rehefa andevozin'ny zavatra iray ny lehilahy dia lasa toy ny andriamanitra ho an'ny olona toy izany ny zavatra.
Mandritra izany fotoana izany dia mankahala ny fifaninanana Andriamanitra, tsy tiany hisy haka toerana ny andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ankoatry ny ny hoe ny zava-mahadomelina mafy dia ratsy eo imason'Andriamanitra, mahatsara ny fahasalamana, dia voarara. Ny zava-mahadomelina mafy toy ny nikôtinina, rongony, voaniho, ary ny hafa dia mampidi-doza ny fahasalamana. Izy ireo dia mailaka haingana amin'ny fanimbana ny voa sy ny fon'ny olona iray, afaka mitarika amin'ny homamiadana ihany koa izy ireo ary hampihena ny androm-piainan'ny olona toy izany. Fa maninona ianao no te handao ny tenanao amin'io fiankinan-doha io izay hamarana ny fiainanao ao anatin'ny toe-javatra mampalahelo? Zava-dehibe ny hanaovanao izay rehetra azo atao mba tsy hanafahana ny zava-mahadomelina.
Ahoana no fomba hialako amin'ny fanafody mahery?
Amin'ny maha kristiana antsika, tsy maintsy mahatakatra isika fa ny herin'ny vavaka dia hery mahery vaika, Ireto manaraka ireto no dingana hanafaka amin'ny fanafody mahery:
Ny famonjena: Voalohany dia tsy maintsy ateraka indray ianao. Ity no dingana voalohany sy lehibe indrindra amin'ny fanafahana anao. Afaka mamonjy anao Andriamanitra afa-tsy rehefa mino Azy, ary ny mino Azy mahatonga anao zanak'Andriamanitra. Araka ny Romana 10 sy 2 Korintiana 5: 17-21, hitantsika fa ny famonjena antsika dia mahatonga antsika ho olo-marina sy ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Vantany vao lasa Zanak'Andriamanitra ianao, dia manomboka mitombo ny toe-panahy araka an'Andriamanitra.
2. Mianara amin'ny mpianatra: 1 Petera 2: 2, dia milaza amintsika fa amin'ny zazakely vao teraka dia mila ny mitady ronono tso-po amin'ilay teny isika mba hitombo amin'ny famonjena antsika. Ny tenin 'Andriamanitra dia vatanao ara-panahy manangana sakafo. Raha te-hitombo amin'ny famonjenao ianao dia tsy maintsy nomena ny tenin'Andriamanitra tsy miova. Mitaky ny tenin 'Andriamanitra ao aminny Faninao io handresena ny fiankinan-doha sy zava-mahadomelina mafy. Arakaraka ny ianaranao ny teny no itomboan'ny fahazoanao famonjena sy ny fitomboan'izany amin'ny famonjena anao, dia maharesy ny fiankinan-doha amin'ny fanafody mafy ianao.
3. Mahatoky ao amin'ny Fiangonanao. Mampirisika antsika ny Baiboly mba tsy handao ny fivorian'ny mpirahalahy. Ny vy maharanitra ny vy, amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, dia tokony hazoto mavitrika ao amin'ny fiangonana misy anao ianao. Tsy maintsy manompo an'Andriamanitra eo ianao ary manamboatra namana araka an'Andriamanitra vaovao avy any am-piangonana. Rehefa mifanerasera amin'ny olona tia an'Andriamanitra ianao, tsy ho ela dia manomboka manao zavatra araka an'Andriamanitra.
4. vavaka: Aza mitsahatra mivavaka. Miteraka hery amin'ny Alitara vavaka isika. Androany dia nanangona lisitr'ireo vavaka fanafahana amin'ny zava-mahadomelina mafy izay hanafaka an'io fanahy io sy hanome anao fandresena ny amin'izany. ampio amin'ny finoana ankehitriny ary raiso ny fanafahana anao.
5. Aza manary an'Andriamanitra mihitsy: Misy zava-mahadomelina be dia be, izay tena sarotra amin'ny fanapahana. Na dia rehefa mivavaka sy mifady hanina aza ianao, dia mbola miady aminy foana. Ny torohevitro aminao anio dia izao: Atsaharo ny miady aminy ary manompoa an'Andriamanitra hatrany. Aza avela hanakivy anao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ny fahalemenao. Tohizo hatrany ny fanompoana an'Andriamanitra na lavorary na tsia ianao dia ho ampy aminao ny fahasoavany. Arakaraka ny anompoanao an'Andriamanitra amin'ny fonao no hanadiovanao ny fonao hanompoanao bebe kokoa. Fantaro anio, tsy misy fepetra ny fitiavan'Andriamanitra anao, tsy hitsahatra tsy hitia anao tahaka ny zanany intsony izy. Aza milavo lefona Aminy. Ataovy antom-bavaka ireo vavaka etsy ambany ary atolotra.
Ry Tompo Ray ô, miatrika vavaka mavesatra aho izao anio izao. Lasa aloky ny tena maha-izy ahy aho noho ny fihinanana tafahoatra ny fanafody mafy. Mety mihitsy ny manamafy fa ny fanafody mafy hatrizay nanjary andriamanitra kely iray izay tsy maintsy ivavahako isan'andro, dia tsy omeniko saina loatra ireo zavatra omen'Andriamanitra rehefa omeko ny zava-mahadomelina mafy. Ry Jesosy Tompo ô, mangataka fanampiana aminao aho, mangataka fanampiana avy amin'Andriamanitra izay hanampy ahy handresy an'io fiankinan-doha io. Tompo ô, mangataka aho mba hanomezanao fanampiana ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray any an-danitra, tonga amin'ny fanoherana fianaran-dratsy aho amin'ny anaran'i Jesosy. Ny vokatr'ity fiankinan-doha ity dia nahatonga ahy tsy lavitra anao Tompo ô, arakaraka ny fiezahako hitady ny lamosiko aminao no nahatonga ahy nanintona ahy ity demonia ity. Tompo ô, mivavaka aho fa hanampy anao indray aho hahita anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka aho mba hanampy anao hahita ny lalan-ko miverina aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aho mba hanovanao ny anatom-poko manontolo amin'ny tananao mahery ary hanao ireo fanafody sarotra rehetra ho voarara ho ahy ianao. Tompo ô, mangataka aho hamono ny faniriako fanafody mafy. Manohitra ny fahefana rehetra aho izay mety manimba ny tanjon'ny fisiako amin'ny alalàn'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina mafy. Manapa-kevitra aho fa tsy nahomby izany hery izany, manomboka izao aho dia mahazo fandresena amin'ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina mafy amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Raiko Tompo manomboka izao, maniry anao hanomboka ny fitsaboana ara-panahy amin'ny fiainako aho, ampahafantariko namana iray ao anatinao. Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aminao aho mba hanaovanao ady aminao. Mivavaka aho mba hisy fihaonana izay hanova ny zava-drehetra momba ahy sy ny fiankinan-doha amin'ny fanafody sarotra. Ry Jesosy Tompo ô, mangataka aho mba hamorona fanahy vaovao ao anatiko amin'ny anaran'i Jesosy.
Tompo Andriamanitra, manapa-kevitra aho fa tsy azo sakanana amin'ny karazana fiankinan-doha amin'ny anaran'i Jesosy. Manome didy amin'ny alàlan'ny fahefan'ny lanitra aho fa hiala amin'ny karazana fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko, efa nahavita ny saiko aho ary mivarotra ho an'ny herinao mba tsy hiverenako. Manomboka izao dia lasa poizina ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy ny zava-mahadomelina mahery.
Averiko miala aina amin'ny fidorohana zava-mahadomelina ny aiko. Tena nahavita loza ianao ary hatramin'izao dia tsy afaka manao intsony ianao. Ambarako aminao ny fahafahako, hatramin'izao dia tsy manan-kery amiko intsony ianao izao. Efa lasa zavaboary vaovao aho ary ny tenako taloha izay nambara taminao hoe efa nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Namoaka didy aho hatramin'izao fa ny tsy nitsoaka ankehitriny sy mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy.
Namoaka didy aho fa ny fiainako dia manomboka manao endrika amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka ny fanamboarana ny fiainako avy amin'ny fanjakana mihoa-pampana aho fa ny fanafody mafy no nitondra azy, ary manomboka manavao izany aho amin'ny ran'i Kristy sarobidy. Hiaina aho hanatanteraka ny tanjon'ny fisiako rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy misy hery, sema na demonia afaka manakana ahy tsy amin'ny anaran'i Jesosy intsony.
Ry Jesosy Tompo ô, mivavaka aho momba ny lehilahy sy vehivavy rehetra izay ny hafa no voatohin'ireo fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina mafy. Mivavaka aho ny hanimba ny fiankinan-doha toy izany ary hanafaka azy ireo ianao. Mivavaka aho ny hanomezanao azy ireo fandresena momba izany fiankinan-doha izany, fa rehefa miakatra indray ny fakampanahy, dia afaka manohitra ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Previous lahatsoratraVavaka hanoherana ny filan'ny nofo
Next lahatsoratraVavaka fisaorana ho fanasitranana
ANNIE CHIMBUVU CHILUBA March 24, 2021 Ao amin'ny 2: 22 am
fanontaniana. ahoana no hahombiazan'ny olona avy any amin'ny tontolo andrefana ary ny lanitra misokatra ho azy no jerena raha aty Afrika isika dia sahirana mamoha ny lanitra misokatra
Teboka vavaka hanoherana ny famosaviana
Oktobra 22, 2020
Teboka vavaka hanoherana ny loza voajanahary
Janoary 21, 2021
Salamo 23 Vavaka mba ho fiarovana sy fiarovana
Aprily 11, 2020
30 Ireo laharam-bavaka famakiana ny fanekena
Novambra 12, 2019